Izingoma eziyi-10 ezihamba phambili (futhi ezimbi kakhulu) zeBritney Spears zesikhathi sonke - Ukuzijabulisa
Izingoma eziyi-10 ezihamba phambili (futhi ezimbi kakhulu) zeBritney Spears zesikhathi sonke
Indlovukazi ye-pop isikhiphe amagugu athile eminyakeni edlule… kanye nokunye okubi.
UBritney Spears ungomunye wamazwi achaza umculo we-pop. Lokho kuyiqiniso nje. Ngesikhathi efika endaweni yesehlakalo ngo-1998 nge '... Baby One More Time,' umhlaba wawungakaze umbone umlingisi onjengaye. Akunjalo ngoba uMadonna wayenomculi wesifazane oluthinte kakhulu lolu hlobo lohlobo.
I-Spears iqhubekile nokusithusa kuwo wonke umsebenzi wayo weminyaka engama-20 +, iletha imidlalo bukhoma nezikhathi zemfashini abantu abasabhekisa kuzo nanamuhla. Waba nomthelela ohlala njalo kuma-2000s naku-2010s, lawa aphela emasontweni ambalwa nje. Isici esikhulu kunazo zonke efeni lakhe, vele, ngumculo wakhe. Ukhiphe ama-albhamu e-studio ayisishiyagalolunye — ayisithupha afinyelele kunombolo yokuqala ku- I-Billboard 200 — futhi kulawo marekhodi kunezinye izingoma ze-pop ezinethonya elikhulu kunawo wonke. Kukhona futhi, ngokwemvelo, okunye ukungahambi kahle. Lokho kungalindelwa uma unomsebenzi omude futhi omuhle njengo-Spears's. Iza ne-ebbs and flow, konke lokhu okumenze waba ngumlingisi ohlonishwayo namuhla.
Izingoma eziyi-10 ezinhle kakhulu zikaBritney Spears, ezingezansi, zimelela izinto eziqine kakhulu kubuciko bakhe: ubumnandi, inkanuko, namazwi ahlakaniphe kakhulu kunendlela abantu abayibona ngayo. Ngokuqondene nokubi kwakhe? Yebo, lalela labo. Uma kukhona, benza izingoma zobuhlakani zikhanye ngokwengeziwe.
10. 'Uzelwe Ukukujabulisa'
Amagama acindezelayo eceleni, athi 'Born to Make You Happy' ucezu olujabulisayo lwe-bubblegum yamashumi ayisishiyagalolunye, oluqukethe amanye amazwi aphelele we-Spears nelinye lamabhuloho akhe angalibaleki. 'Biza igama lami, ngizobe ngikhona. Ukukubonisa nje ukuthi ngikhathalela kangakanani, 'uS Spears uyacula, ngokungaphefumuli, ngaphambi kokushaya komculo okhaliphile, onamandla. Kulula ukwedlula umoya.
9. 'Ngigoqa kanjani'
Itshe eligingqikayo ebizwa ngokuthi 'How I Roll' ingoma emnandi kakhulu ye-pop yango-2011, futhi ngesizathu esihle. Yithrekhi yesihlanu ekwi-albhamu kaS Spears Owesifazane Obulalayo , iqoqo lomlilo kodwa elijwayelekile le-electro-pop enezitezi ezine phansi. Kepha akukho okujwayelekile mayelana nokuthi 'Ngigoqeka kanjani.' Ngokukhiqizwa kokuzama kakhulu namaphimbo ahlanekezelwe ngokudlala, kuzwakala sengathi okuthile uCharli XCX noma omunye wabenzi bokunambitha bamanje be-pop angakhipha namuhla.
8. 'Ukuvikelwa ngokweqile'
Ukuzizwa ulawulwa ngokweqile noma kuhlolisiswa kuyisihloko esingaguquguquki ku-Spears's discography — bheka nje izingoma ezinjenge- 'Piece of Me' noma ividiyo yomculo ka- 'Everytime' njengobufakazi. Kepha le motif iqale 'Ngokuvikelwa ngokweqile,' ithrekhi ekhiqizwe iMax Martin neRami efihla ukungena kwayo ngehuku lokubulala.
Lokhu, kude kakhulu, ithrekhi yomuntu siqu kakhulu ye-Spears. (Waziwa njengombhali wengoma eceleni komunye umuntu.) Bakholelwa abanye njengempendulo kwividiyo kaJustin Timberlake ethi 'Cry Me a River' (eyayikhomba ukuthi uSpears wayengathembekile ebudlelwaneni babo bakuqala), 'I-Everytime' ukuhlukumeza, okulimazayo kokuzisola nesizungu.
6. 'Okungajwayelekile Wena'
Mhlawumbe ama-Spears kufanele atshintshe u-'Everytime 'we' Unusual You 'ngokuzayo lapho enza i-ballad. Le ngoma ye-melancholic, midtempo iyintandokazi phakathi kwama-Spears diehards. I-Hyper-electronic kodwa efudumele ngendlela engaqondakali, 'Okungajwayelekile Wena' kukhombisa uSpears engabaza isithandwa esisha esiza empilweni yakhe. 'Baby awujwayelekile. Akekho umuntu okutshele, obekufanele, wephule inhliziyo yami? Ngilindele ukuthi wenze njalo, kungani-ke ungavumanga?, 'Uyacula, izwi lakhe ligcwele ku-Auto-Tune njengama-synths athobekile ngemuva.
Enye ingoma enengqikithi ehlolisisiwe — kuphela lena ushukela omsulwa. U-'Lucky 'uhlala engomunye wabaculi bokuqala abangcono kakhulu be-Spears: inhlanganisela ephelele yomsindo omnandi ophuma kwirekhodi lakhe lokuqala namazwi azwakala ekhulile kakhulu. Ibhuloho lengoma, eligcwala ngamandla we-melodramatic, seliphenduke inganono yekaraoke iminyaka eyizinkulungwane.
4. 'Gimme Okuningi'
Ungaba kanjani i-unicorn
Yisho amagama amathathu anamandla ngokwamasiko kunokuthi 'NguBritney, bitch.' Awukwazi. U-'Gimme More 'akenzanga kahle ukuthi abe nombono wokuqala omuhle, njengoba abalandeli beqale bakuzwa ngesikhathi kuduma iSpears kuma-VMAs ka-2007. Kepha selokhu laba iculo lekilabhu: elibuhlungu, elingapheli, futhi elishaya nge-hazy-3 AM ukuzitika ngamanyala.
3. 'Phefumulela kimi'
Enye intandokazi ejulile phakathi kwabalandeli, 'Ukuphefumula Ngami' yi-Spears esiseduzane eyake yafika eMadonna I-Erotica inkathi. Lesi siqeshana sokulutha se-Euro-trance senziwe samuntu ocansini, sinebhuloho elakha futhi liqhume njenge-orgasm. Njengoba uS Spears asho ngonyaka we-2003 ingxoxo noDiane Sawyer , 'Breathe on Me' yingoma ekubeka kufayela le- isimo .
Abalandeli be-Spears bangahle bahlahle amehlo abo ku-'Onity 'manje, kepha kungaba ubuwula ukungawufaki phezulu kulolu hlu. Ngemuva kwakho konke, ukuphela kwethrekhi etholile i-Spears a Grammy (2005, Best Dance Recording) futhi ukukhiqizwa kwayo, ngaleso sikhathi, kwakuyizinguquko. 'Ubuthi' yingoma eqhubekela phambili kakhulu kuma Spears Endaweni i-albhamu, izip nge-panache ye-techno-pop echaze umsakazo kuma-2010s. (Le ngoma, khumbula, yaphuma ngo-2003.)
1. '... Ingane Isikhathi Esisodwa'
Ayikho indlela enye ingoma ebingaphuma ngayo phambili. '... Baby One More Time' kalula ingenye yezingoma ezakhiwe ngobuciko zaso sonke isikhathi. Imizuzwana emithathu yokuqala yethrekhi ayaziwa nje kuphela: iyingxenye yendwangu yesiko lethu. Futhi ividiyo yomculo ehambisana nayo inethonya elifanayo. '... Baby One More Time' ngokuqinisekile kungeniswe esikhathini se-pop se-Y2K, futhi ngalokho sinokubonga okungunaphakade. Kuyingoma emnandi kakhulu yakwa Spears ngokususelwa ekutheni ishintshe inkambo yomculo othandwayo.
10. 'E-mail Inhliziyo Yami'
Le ngoma noma indikimba yayo ayikaze ikhule kahle. Onke ama-ballads okuqala akwa-Spears, ngokweqiniso, ayi-saccharine impela, kepha lena iqotho kakhulu.
9. 'Ngiyathanda Rock' N 'Roll'
Ividiyo yomculo kaS Spears yalesi simbozo sikaJoan Jett isezingeni eliphezulu. Kodwa ingoma uqobo? Kwakungadingeki ncamashi.
8. 'Ingane Yami'
Amazwi okuvula ale ballad, 'izandla ezincane,' abe yihlaya phakathi kwabalandeli be-Spears. Ukhuluma ngezingane zakhe, ngombono wokuthi kufanele zibe mnandi, kepha kuvela kumnandi kakhulu kunanoma yini — ikakhulukazi lapho kubhangqwe ukukhiqizwa kwezingelosi okwedlulele kwethrekhi.
7. 'Mmm Baba'
'Mmm Papi,' Umzamo kaSpears ngeminyaka engamashumi ayisithupha nambili, uwela phansi ngenxa yekhorasi lawo elishodayo. Lokho kushiwo, umculi uthola amaphuzu wobuciko ngokulethwa kwakhe kwezwi okumnandi ekamu.
6. 'iBas Fat Big'
Ukukhohlisa ngokuzwakalayo akuyona neze ikhwalithi engemihle kumculo we-Spears — hhayi uma kusetshenziselwa ukuthuthukisa ingoma ngobuhlakani. Kepha akunjalo 'ku-Big Fat Bass,' ehlubula ama-Spears wabo bonke ubuntu futhi imshiye esenkingeni yolwandle lwamabhithi aheha ikhanda.
uhlu lwamakhink nezincazelo
5. 'Kufanele kube lula' (feat. Will.i.am)
Leyo nothi isebenza ku- 'It It Be Be Easy,' eguqula iBritBrit ibe irobhothi futhi ifake ukuwohloka kwe-EDM okuzwakala ukuthi kunesikhathi sokulethwa.
4. 'Amantombazane Ahle' (eno-Iggy Azalea)
'Ama-Pretty Girls', ngokudabukisayo, yimizamo nje efudumele yokubuyisa ingoma ka-Ariana Grande no-Iggy Azalea ethi 'Inkinga.' Yonke into kusuka kumculo we-chanty, we-bratty kuya ku-rap ka-Azalea ozolayo izwa nje-futhi njengokuhlehla kwe-Spears.
3. 'Tik Tik Boom' (feat. T.I.)
I-'Tik Tik Boom 'iyabukeka, impela, kepha izwi likaSpears alicaci nakancane kuyo, futhi amagama evesini likaTI awanazaba. ('Uyayithanda indlela engimdla ngayo, ngiyamshaya, ngiyamshaya. Mphathe njengesilwane, umuntu abize iPETA.' Um, ngiyaxolisa?)
2. 'Chillin' With You '(feat. Jamie Lynn)
Kuhle ukuthi uSpears ufake udadewabo uJamie Lynn ku-'Chillin 'With You,' kepha ingoma uqobo lwayo ayisebenzi kahle. Amagama afanayo afanayo kanye nekhorasi ekhanda ikhanda yiyona imbangela yokuwa kwayo.
1. 'Umbukiso Wangasese'
UMkhonto weluleke ngempela futhi wadlala ngezwi lakhe kwi-albhamu yakhe yango-2016, Inkazimulo . Kwezinye izimo, njengengoma ethi 'Okudingayo,' uyanqoba, nakwabanye, kulungile ... Ngizovumela le threkhi izikhulumela. 'I-Private Show,' ngeshwa, ingoma engalaleli-futhi ngisho lokho ngothando olukhulu nenhlonipho ngoBritney Jean Spears. Lo bekufanele ngabe ushiywe egumbini lokusika.
UChristopher Rosa ungumbhali wokuzijabulisa kwabasebenzi ku- Ubuhle. Mlandele ku-Twitter @ sbusisomngadi1 .
imibono ebomvu nezinwele ezimhlophe
gqoka nge-push up bra
ukuswela okuncane komqubuko osebenzayo
izindleko zokuvuna nsuku zonke ngesonto
eyeshadow engcono kakhulu yamehlo aluhlaza